China 24kV 200A Rotatable Feedthru Fanye ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | Anhuang
Anhuang ọkachamara na Rotatable Feedthru Insert, anyị na-enye nnukwu mma Rotatable Feedthru Insert. Ngwaahịa anyị kwekọrọ na IEEE386, na ụkpụrụ IEC.
24kV 200A Rotatable feedthrough fanye eji na-enye sọrọ bushings si otu ngwa bushing ọma。 Ọ na-eme converting radial-ndepụta mgbanwe na-eri nri thru nkesa na-agbakwunye na-akara arrester nchedo ma mfe ma bara uru. Ya patented, wuru na-torque na ịmachi ratchet na-egbochi ọrụ site na mberede na-agbasa bushing ọma studs n'oge echichi.
Ihe ntinye ihe ntaneti 200A nke uzo abuo maka ijikota eriri ala iji kesaa sistemụ ike nke pad-mound transformer, igbe igbe ochichi gbara gburugburu, jiri ya na nke a bu: Igbaji okpukpu ikpere ikikere ikpere aka ikpere na ngwa ngwa.
A na-akpụzi ikikere nkwonkwo aka site na iji sọlfọ dị elu nke na-egbochi ma na-eduzi EPDM roba, mgbe ejiri ya na ngwaahịa ndị atụnyere, ntinye ahụ na-enye njikọ njikọ ngwa ngwa zuru oke na nke miri emi.
Ihe nkedo njikọ ihe nkedo nke okpukpu abụọ, nke di na nkuku nke ihe nkpuchi, na-ewepu oru nke ibu nke ikwuputa ikpere aka na ihu ahihia. Ihe mgbanaka na-acha odo odo na-enye nzaghachi ozugbo iji chọpụta ma ikpere aka ahụ etinyere na bushing. ma ọ bụrụ na mgbanaka odo na-ekpuchi kpamkpam site na nkwonkwo nkwonkwo ibu, a na-agbanye ya n'ụzọ zuru ezu, ma ọ bụrụ na a na-ahụ mgbanaka ahụ, a ga-enwe ike ikpere aka ahụ n'ụzọ ziri ezi tupu nsogbu ọ bụla apụta.
Nkọwa Nkọwa Nke volta ọrụ na-arụ ọrụ ugbu a
200A 24kV ndepụta-thru Bushing Fanye AH STT-24/200 24kV 200A
Nkọwa Ntughari Nke na-arụ ọrụ voltaji na-arụ ọrụ ọnụ
200A 24kV ndepụta-thru Bushing Insert AH STT-24/200 24kV 200A
Nke gara aga: Na-arụ Ọfụma
Osote: 15kV 200A Rotatable Feedthru Fanye
15kv 200a na-agba ọsọ
15kv 200a Rotatable Feedthru Fanye
Bushings Na ntinye
15kV 200A na-agbanye ala